Global Voices teny Malagasy » Mpampanoa Lalàna Mikaroka Izay Hikaravasiana Mafy Ireo Vehivavy Saodiana Manao Hetsi-panoherana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Janoary 2013 16:43 GMT 1	 · Mpanoratra Anas Soliman Nandika nirinandrea
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Ny Asabotsy 05 Janoary lasa teo, ny fianakavian'ireo voafonja tsy mbola voaheloka dia nahavita nikarakara hetsi-panoherana kely tao an-tananan'i Buraida, Arabia Saodita ho fangatahana ny famotsorana ireo gadra. Vetivety ihany ireo mpanao hetsi-panoherana, izay vehivavy sy ankizy ny ankabeazany, dia efa voahodidina polisy ary nosamborin'izy ireo, satria moa tena voararan'ny lalàna mafy ny fanehoana hevitra ankalamanjàna. Na nisy aza anefa io fandràrana io, tsy nanakàna ireo fianakavian'ny voafonja hanao hetsi-panoherana am-polony maro sy fitorevahana nandritra izay roa taona lasa izay tany amin'ny faritra tsirairay manerana ny firenena, izay nilazan'ireo Mpiaro ny Zon'olombelona fa misy gadra efa ho 30.000 tsy misy fiampangana , izay voasambotra tao anatin'ilay “ady mafonja hiadiana amin'ny fampihorohoroana” taorian'ny 9/11  ny ankamaroan'izy ireo.
Vondroa mafàna fo tsy mitonona anarana iray @e3teqal  (izay adika hoe “Fanagadrana”) dia nanambara fa nisy ny fampiasana herisetra tamin'ny fotoana nisamborana ireo ankizy sy vehivavy ireo [ar] :
@e3teqal : Maika : Voarain'ny mpandeha an-tongotra iray an-tsary ny herisetra nianjady tamin'ireo vehivavy sy ankizy fony izy ireo voasambotra.
Nialoha lalàna nandeha tany amin'ny fonja al-Safra akaikin'ny Buraida ny fianakavian'ireo vehivavy sy ankizy ireo tamin'ny fotoana nisamborana azy, izay nolazaina ho ho toerana hitazonana azy ireo. Nohodidin'ireo polisy io toerana io, kanefa dia nitohy nandritra ny alina ny fitorevahana. Tamin'ny maraina, ny printsin'ny faritra Qassim, izay misy an'i Buraida, dia namoaka didy [ar] hamoahana ny ampahany amin'ireo vehivavy, sy hamindra ny sasany any Riyadh (nisy zaza iray raha kely indrindra ) ary hitazona hatrany ireo sasany ao Buraida. Tamin'ny 2:06 tolakandro, ny iray amin'ireo mpandray anjara tamin'ilay ftrevahana no nandefa bitsika manao hoe :
@m44au : Voahodidina izahay. Dimampolo ny lehilahy ary folo ireo vehivavy. Mivavaha ho anay, ary tongava manampy.
@majeed06 : Nitomany mafy mihitsy ilay lahy antitra iray, tamin'ny nanontanian'ilay mpanao famotorana azy hoe “Inona no tadiavinao?” Namaly izy hoe: “Tsy mitady ny zanako lahy aho, fa ny zanako vavy ihany no tadiaviko”
Vehivavy telo voasambotra tamin'ilay hetsi-panoherana no niakatra fampanoavana tao Buraida omaly maraina, 9 Janoary, tamin'ny fomba tsy mbola fahita. Tsy natao fantatra olona mihitsy ilay fitsarana, ary tena notsindrin'ilay mpitsara mafy mihitsy fa tokony ho lehilahy iray ihany no miaraka amin'ny vehivavy iray. Ireo mafana fo sy ireo fianakaviana dia navoakan'ny  [ar] mpitandro filaminan'ny fitsarana.
@abdulllah1406 : ny mpampanoa lalàna, Ibrahim al-Dihish, dia nilaza tamin'ilay mpitsara mba hanagadra ireo voatazona ary hikaravasy azy ireo, notsindriany mafy mihitsy io resaka io.
@abdulllah1406 : Nangataka tamin'ireo vehivavy ilay mpitsara mba hiala tsiny eo anatrehany noho ny fanaovan'izy ireo ilay hetsi-panoherana , kanefa nandà foana izy ireo.
@abdulllah1406 : Hoy ny iray tamin'ireo voafonja: Mianiana eo anatrehan'Andriamanitra aho fa na dia andatsahanareo sazy dimy ambiny folo taona an-tranomaizina aza, dia tsy hiala tsiny mihitsy izahay . Mangataka ny zonay izahay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/01/23/44364/
 gadra efa ho 30.000 tsy misy fiampangana: https://www.youtube.com/watch?v=urILE3ttfYs
 voasambotra tao anatin'ilay “ady mafonja hiadiana amin'ny fampihorohoroana” taorian'ny 9/11: https://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-human-rights-abuses-name-fighting-terrorism-20090722
 didy : https://twitter.com/e3teqal/status/287771030552985600
 zaza iray raha kely indrindra: https://twitter.com/chejihad/status/288117493308997632
 dimy minitra talohan'ny nisamboràna azy ireo : http://www.youtube.com/watch?v=sJFDq_S2CA0
 navoakan'ny : https://twitter.com/181Umar/status/288894367689756672